जुन 13, 2019 जुन 13, 2019 साइन्स इन्फोटेक4Comments डा. राम बहादुर बोहरा, भिटामिन ई
भिटामिन ई यस्तो औषधि हो जसको माध्यमबाट हामीले आफ्नो स्वास्थ्यमा थुप्रै परिवर्तन ल्याउन सक्छौं । भिटामिन ई को कमिको कारण प्रजनन क्षमतामा कमि, आँखामा रेटिना सम्बन्धी रोग, नशा सम्बन्धी रोग हेमोलिटिक एनीमिया अल्झाइमर पार्किन्सन डिजीज जस्ता रोगबाट यो भिटामिनले बचाउने काम गर्दछ ।
भिटामिन ई एउटा यस्तो औषधि हो जसको कमिले मानिसमा थकाई लाग्ने, छाला सम्बन्धी रोग, मासपेसी दुख्ने, कपाल झर्ने, कमजोर हड्डी, घाउहरू चाँडो निको नहुने जस्ता थुप्रै लक्षण देखिन थाल्दछ । गर्मीमा नाकबाट रगत बग्ने रोग पनि भिटामिन ई को कमिले हुने गर्दछ ।
रातीमा आँखा कम देखिएको भएमा पनि भिटामिन ई को कमि हुनसक्छ किनभने भिटामिन ईको कमि हुनु नै भिटामिन ए कमि हुन थाल्दछ । भिटामिन एले आँखालाई सुरक्षित राख्न र नेत्र ज्वति बढाउन मद्धत गर्छ भने भिटामिन ईले शरीरमा चाहिने भिटामिन एको सहि लेवल राख्न मददत्त गर्दछ ।
राती आँखा नदेख्ने रोगमा पनि भिटामिन ई कम हुन सक्छ किनभने शरीरमा जब भिटामिन ई कम हुन थाल्दछ तब भिटामिन ए को कमि हुन थाल्दछ । हाम्रो स्वास्थ्य सुधारका निमित्त जति आवश्यक भिटामिन एको छ त्यो भन्दा बढी भिटामिन ई को छ भन्ने कुरा हामीले जान्न आवश्यक छ ।
भिटामिन ईको क्यापसुल भन्दा प्राकृतिक स्रोत सवैभन्दा राम्रो स्रोत मानिएको छ । भिटामिन ई पाइने स्रोतमा कुखुराको अण्डा, आप, ब्रोकाउली, बदाम, मेवा, काडलिभर आयल, हरियो साग सब्जीमा भिटामिन ई प्राप्त गर्न सकिनेछ । बजारमा ४००मि,ग्राम, ६०० मि.ग्राम र २०० मि.ग्रामको क्यापसुल उपलब्ध छ । भिटामिन ई सेवन गर्नुपर्ने हो या होइन भन्नेबारे डाक्टरको परामर्शमा लिने गर्नु राम्रो हुनेछ ।
← मानिसहरुले किन लागुऔषध सेवन गर्छन् ?
हृदयघात (Heart Attack) को बारेमा जानकारी →
4 thoughts on “भिटामिन ई र यसको उपयोगिता”
Pingback: मटर केराउको उपयोगिता
Pingback: यस्तो छ टिमुरको उपयोगिता, जानी राखौ
Pingback: यस्ता छन् मानव स्वास्थ्यमा पुदिनाको उपयोगिता, जानी राखौ
Pingback: मानिसलाई कृतिम भिटामिन कति छ आवश्यक ? थाहा पाई राख्नुहोस्